एजेन्सी – श्रीलंकाका तीव्र गतिका बलर लाथिस मलिङ्गामाथि भारतीय गायिका चिन्मयी श्रीपदालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ ।
केहि बर्ष पहिले आईपीएल चलिरहेको बेला मुम्बईको एक होटलमा मलिङ्गाले आफुमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत सार्वजनिक गरेकी छन् । भारतीय इन्डियन टिभी स्पोर्टका अनुसार केहि बर्ष पहिले आईपीएल चलिरहेको बेला श्रीपदाका आफ्नो साथी मुम्बईको एक होटलमा हराएकी र उनलाई खोज्न जादा मलिङ्गासँग एक्कासी उक्त होटलमा भेट भएको थियो ।
उनले भनेकी छिन्, ‘मलिङ्गालले मेरी साथी उनको कोठामा भएको बताए । म उनको कोठामा पुगेँ, त्यहाँ मेरी साथी थिइनन् । त्यसै क्रममा मलिंगाले मलाई ओछ्यानमा लडाए । म उनीबाट फुत्किन खोजेँ तर सकिनँ । त्यति नै बेला डोरबेल बज्यो । होटलका स्टाफ केही कामले कोठामा आए । म त्यसै बेला वाशरुममा गएँ र मुख धोएर बाहिर निस्केँ ।’ तर क्रिकेटर मलिंगाले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज २६, २०७५२०:१३
पारसको खस्किए, सोमपालको सुधार ! यस्तो छ आइसिसी वरीयता !
फुटबलमा राकर्स फुल्टेक्रा विजयी
नेपाललाई क्रिकेटमा इतिहास कायम गर्ने मौका !